Beka ucezu lwephepha lokuhlunga eliyindilinga phansi kwesitsha se-petri, ubeke induku yengilazi emise okwe-U, bese ubeka amaslayidi amabili engilazi ahlanzekile endukwini yengilazi. Ngemuva kokuvala inzalo, engeza ama-milliliters ambalwa esisombululo se-oyela esivunyelwe u-20% ephepheni lokuhlunga ngendlela ye-aseptic. Umsebenzi wawo omkhulu ...Funda kabanzi »
Izindlela 1. Faka ibhulokhi lezicubu ekhasethini lokushumeka elilahlwayo elinenombolo yezicubu ebhalwe kulo, umboze ibhokisi lokususa amanzi (insimbi engagqwali), bese ulifaka kubhasikidi osusa amanzi emshinini wokususa amanzi noma emanzini. 2.Store phansi ashumekwe die ungqimba engezansi th ...Funda kabanzi »
Isikali, ukukhula, ukuhlaziywa kanye nesibikezelo sango-2030 somkhakha wezokukhiqiza ophezulu enkabeni yezokuthutha emakethe
Ukwanda okwethusayo kwenani lamacala e-COVID-19 emhlabeni wonke kanye nokunganele kwengqalasizinda yokuhlola esekwe elebhu yizinto ezibalulekile ezikhuthaza ukusetshenziswa kwama-swabs amasha kanye nemidiya yokulethwa kwamagciwane. Ngaphezu kwalokho, izinhlaka zikahulumeni zifuna ukuvunyelwa ngokushesha kwemikhiqizo emakethe e ...Funda kabanzi »
Isikhathi Iposi: May-26-2021
Izinhlobo ezahlukahlukene zepetri dish autoclave iyathengiswa
Isikhathi Iposi: May-21-2021
Ngamafemu ambalwa impela, singaveza izinhlobo eziningi ze-petri dish autoclave, i-laboratory petri dish, Samukela abathengi nxazonke zegama ukuze baxhumane nathi ngokusebenzisana kwebhizinisi okuzayo. Izimpahla zethu zihamba phambili. Uma Usukhethiwe, Ufanelekile Phakade! Sine-eff emangalisayo ...Funda kabanzi »
Ishidi Leqiniso: UMongameli Biden Umemezela Izenzo Ezintsha Zokunweba Nokuthuthukisa Ukuhlolwa Kwe-COVID-19
Njengengxenye yecebo lakhe likazwelonke lokuphendula kwe-COVID-19 nokulungiselela ubhadane, uMongameli Biden umemezele namuhla uchungechunge lwezenzo ezintsha zokwandisa ukuhlolwa kwe-COVID-19, ukwenza ngcono ukutholakala kwezivivinyo, nokulungiselela kangcono usongo lokuhlukahluka. Njengoba ezokuphatha zisebenza c ...Funda kabanzi »
Indima ebalulekile yesidlo sePetri
Isitsha sePetri (iPetri plate) isitsha esilahlekile sengilazi esikhishwe ingilazi esivame ukusetshenziselwa ukwenza amasiko amancane (amapuleti e-agar). Kukhona ingilazi nepulasitiki izitsha zePetri, futhi zombili zingafakwa inzalo (kusetshenziswe i-autoclave) ziphinde zisetshenziswe. Ngaphambi kokusetshenziselwa izinhloso zamasiko, kubalulekile ukuthi ...Funda kabanzi »